प्रचण्ड र माधाव नेपालबीच फेरी विवाद, किन रिसाए वरिष्ठ नेता नेपाल ? « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
नेपालको प्रचण्डलाई प्रश्न, राजनीतिक प्रस्ताव किन गाउँतहसम्म पठाएको ?
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणपछि पार्टीभित्र एउटै समूहमा अनुबन्धित भएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका नेता नेपाल प्रचण्डको पछिल्लो कार्यशैलीबाट रुष्ट बनेका हुन् ।
खासगरी प्रचण्डले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ पुस्तकका रुपमा छपाई गरेर पार्टीको तल्लो कमिटीसम्म पठाउन थालेपछि उनी प्रचण्डसँग रिसाएका हुन् । प्रचण्डले उक्त राजनीतिक प्रस्तावलाई ‘राजनीतिक दस्तावेज’ भन्दै छपाई गरेर पार्टीका विभिन्न कमिटीगत तहमा पठाएका छन् ।
उनले त्यो प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकमा आफूले प्रस्तुत गरेको ‘राजनीतिक दस्तावेज’ भनेर पार्टीको तल्लो तहसम्म पठाइरहेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने उक्त प्रस्तावलाई ‘आरोपपत्र’को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
बैठकमा पेश भएको उक्त प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदै पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेर तल्लो कमिटीमा पठाएपछि वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति सोत जनाएका छन् । त्यसलाई सचिवालयले निर्णय गरेर मात्रै पठाउन सकिने भन्दै उनले त्यस्तो हर्कतलाई रोक्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
यद्यपि, उक्त प्रस्ताव ‘झूटहरुको पुलिन्दा’ भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै जवाफ नदिने बताउँदै आएका छन् ।
नेता नेपालले पनि आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा आरोपपत्रलाई तल्लो तहको कमिटीमा लगेकाले यो राम्रो संकेत नभएको बताएका छन् । प्रचण्डले गत कात्तिक २८ गते पेश गरेको २८ पृष्ठ लामो प्रस्तावलाई पुस्तकको आकार दिई प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पठाएका छन् ।
प्रचण्डको कदमले पार्टी विभाजनतर्फ लैजाने नेता नेपालको धारणा छ । आफूहरुले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली सच्चाउने तथा पार्टीलाई विधि, पद्धती र कमिटीसम्मत तरिकाले चलाउनका लागि मात्रै उक्त प्रस्ताव दर्ज गरेको तर, पुस्तक नै बनाएर वितरण गर्नुमा आफ्नो संलग्नता र समर्थन नरहेको नेता नेपालले स्पष्ट पारेका छन् ।